Pandora yakagadziridzwa yeApple Watch uye inoenderana naSiri | Ndinobva mac
Pandora inogadziridza yeApple Watch uye inotsigira Siri
Iko Pandora kunyorera kwave kungovandudzwa mushanduro yayo yeApple Watch uye izvozvi yatove kutsigira Siri. Iwe unotoziva kuti chishandiso ichi chakada kufanana neSpotify kana Apple Music. Iyo ine yemahara vhezheni asi zvakare ine kunyorera-kwakavakirwa premium mode. Ichokwadi kuti haina vashandisi iyo vanokwikwidza nayo, asi iko kunyorera kunoshanda chaizvo.
Siri ichakubatsira iwe kudzora zvaunonzwa kuburikidza naPandora
Pandora akagadzirisa mashandisiro ayo nezuro. Tiri kuenda vhezheni nhamba 2004.2. Nayo, iyo application inowedzera akati wandei maficha. Asi iyo inomiririra kupfuura iyo pakati pavo vese Siri rutsigiro paApple Watch. Naizvozvi, vashandisi vePandora vanozokwanisa kubvunza iyo digital mubatsiri kuridza nhepfenyuro, nziyo, albamo uye podcast zvakananga pa smartwatch Ingo taura chimwe chinhu senge, "Hei Siri, tamba Thumbprint Radio paPandora" uye zvese zvinofanirwa kufamba mushe.
Izvi zvese nhau iyo yatinogona kuwana mune nyowani Pandora yekuvandudza:
Iye zvino tinogona kugadzirisa zvisina kujairika zviteshi. Ehe, izvo zvinongoshanda chete kune avo vari premium.
Siri paApple Tarisa: Kumbira Siri kuti aridze zviteshi, nziyo, maalbhamu, uye podcast Tinogona zvakare kutaurira mubatsiri kana rwiyo rwuri kutamba panguva imwe chete, tinoda: "Hei Siri, ndinoda rwiyo urwu."
Siri yakawedzerwawo kune iyo iOS app.
Izvo zvakanaka kuti zvishoma nezvishoma musika urikushanduka murudzi urwu rwezvishandiso zvakanaka kubereka mimhanzi yedu mukutenderera uye hativimbe chete paSpotify kana Apple Music. Zvakare isu tatoziva kunetsana pakati pevaviri vekupedzisira,saka uchiona mashandisiro echitaera ichi kuvandudzwa, inogara iri Nhau dzakanaka, pasina mubvunzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Pandora inogadziridza yeApple Watch uye inotsigira Siri
Chekutanga Beta yekushandisa kwaApple kupokana neCOVID-19 iripo
Neiyo switchchResX app tichava nekutonga kuzere pamusoro pekugadziriswa kweako mutariri